Kubhikishe imphakathi ngenxa kagesi | News24
Kubhikishe imphakathi ngenxa kagesi
Umphakathi wase Buffer nowase Slangspruit ubhikishe wavala umgwaqo ukhala ngogesi ophele endaweni ngoMgqibelo.
NGOMSOMBULUKO ekuseni umphakathi wase Buffer nase Slangspruit ubhikishe wavala umgwaqo ongenela kulezindawo ngamathaya avuthayo ukhala ngogesi othe uphele ngoMgqibelo, ngomhlaka 17 kuJuni.
Lomphakathi ubungakhalazi ngogesi kuphela njengoba ababhikishi bethe ezinye izikhalo zabo zimayelana nokuphela kwamanzi kusukela ngoLwesine oledlule kuya kuMgqibelo, nangezindlu zangasese abathe zigcwele ziyaphuphuma njengoba umasipala ungazimpompi.
“Sifonele kwamasipala izikhathi eziningi sikhalazi ngamanzi nangogesi kodwa abasinakekeli, baningi abantu abafonile,” kusho omunye wababhikishi uSibusiso Xulu ohlala e-Buffer.
Uthe ngeSonto, ngomhlaka ka 18 kuJuni, umphakathi ubenomhlangano nekhansela lendawo, uSibongile Mcwango, ehholo lomphakathi. “Ukhansela usitshele ukuthi okwamanje abekho abantu abasebenza ngogesi kwamasipala yingakho ungekho. Uthe naye akazi ukuthi ugesi uzobuya nini,” kusho uXulu.
Elinye ilungu lomphakathi, uZola Nyembezi, likhononde ngamaphoyisa lathi akuqondakali ukuthi kungani ekhethe ukusebenzisa izinhlavu zenjoloba kanye nesisa esikhalisa unyembezi yize ababhikishi bengalimazanga muntu noma impahla yomunye umuntu. “Akekho oke wathatha ithuba lokuthi alalele ukuthi kungani abantu bebhikisha.
Abantu badiniwe, sekuphele izinsuku ezintathu singenawo ugesi futhi into embi kakhulu ukuthi siyawa khokhela ama-rates kanti nogesi futhi siyawuthenga kodwa kunokuthi umasipala uthumele umuntu ozobhekana nalolu daba bathumela amaphoyisa,” kusho uNyembezi.
Bathe asikho isimemezelo esenziwa umasipala nayikhansela ukuxwayisa amalungu omphakathi ukuthi amanzi kanye nogesi kuzophela nokuthi imbangela yalokho yini.
“Ukudla kuyabola emafrijini, izingane azikwazanga nokuthi ziye esikoleni, abanye abakwazanga nokuthi baye emsebenzini. Sisenkingeni ikakhulukazi njengoba kungubusika, kuyabanda, bathi siphile kanjani?” kusho uNyembezi.
Unina wezingane ezixhilwe yisisa esikhalisa unyembezi, uThabisile Zungu, uthe akaqondi ukuthi kungani amaphoyisa ekhethe ukujikijela izingane zakhe ezincane ngaso isisa esikhalisa unyembezi.
“Zenzeni izingane? Zigcine zihanjiswe emtholampilo, ngicele umuntu ozozihambisa. Kumele amaphoyisa achaze ukuthi zijikijelwelani izingane,” kusho uZungu.
Elinye ilungu lomphakathi, uPhumlani Molefe, lithe amaphoyisa alidubule ezinqeni ngenhlamvu yenjoloba yize ebengabhikishi eziqhamukela egaraji likaphethiloli.
Mayelana nesikhalo sokuthi umasipala awuzimpopmi izindlu zangasese, intatheli ye-Echo ikhulume noNtombiyesizwe Mbewu othe eyakhe isigcwele ngendlela yokuthi akuselula ukuthi ayisebenzise ngokukhululeka. “Abasho ukuthi yindaba bengazimpompi ezethu, imoto ivele ifike impompe la ethanda khona ihambe ingabe isabuya. Kade zifikile nje ngeledlule zampompa kweminye imizi kweminye imizi zangafika, bathi asifake amanzi sizigovuze izindlu zethu zangasese, siyakwenza lokho, sikhiphe nodoti. Mina leli elasekhaya wonke unyaka odlule alizange lize limpompwe naku lo lutho nje,” kusho uMbewu.
UScelo Khumalo, naye oyilungu lomphakathi, uthe ababikhishi baceliwe ukuthi bengacekeli phansi impahla futhi bengashayi izimoto zomphakathi kuphela bezicele ukuthi zingawusebenzisi umgwaqo.
Ikhansela lendawo, uSbongile Mncwango uthe: “Ngibize umhlangano izolo [ngeSonto] womphakathi ngokulayelwa yiwona umphakathi ungifuna uthi angiwazise ukuthi kwenzakalani. Kunabasebenzi kwamasipala abamisiwe ngokusho kwezimenenja zakwamasipala yingakho bengakwazi ukuwulungisa ugesi. Ngiphinde ngakhuluma nosekela wemeya wathi kukhona imizamo eyenziwayo mayelana nokulunga kukagesi mina angihambe ngiyokwethula emphakathini ukuthi umasipala uyazwelana nabo futhi uzozama ngawo wonke amandla ukuthi ubuye ugesi kodwa naye akazi ukuthi uzobuya nini kodwa bazokuqinisekisa ukuthi umphakathi uyabuyelwa ugesi,” kusho yena.
Okhulumela umasipala waseMsunduzi uThobeka Mafumbatha uthe kusolwa iqenjana labasebenzi bakwamasipala ngokuphela kukagesi.
“Kuyasikhathaza kakhulu ukuphazamiseka kukagesi njengoba sekwenze umonakalo emphakathini yethu. Umasipala waseMsunduzi uhlezi unobudlelwano obuhle nabasebenzi bawo yingakho njengo masipala sifisa ukusho ukuthi kukhona imigudu abasebenzi abangayilandela uma kukhona izikhalo abanazo ngomasipala. Siyabagqugquzela futhi ukuthi belandele imigudu efanelekile futhi esemthethweni,” kusho uMafumbatha.
Uthe umasipala ufisa ukuxolisa ngokuphela kukagesi nokuthi uzama ngayoyonke indlela ukuthi ugesi ubuyele esimeni.